कार्ल मार्क्स जन्मिएको २०० बर्ष पुग्नु अघि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै दुई तिहाई « Kathmandu Television HD
कार्ल मार्क्स जन्मिएको २०० बर्ष पुग्नु अघि नै नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको ५ बर्षे आवधिक सरकार झण्डै दुई तिहाई बहुमत सहित सत्तामा आयो ।
कार्ल मार्क्स जन्मिएको लगभग एक सय वर्षपछि सन् १९१७ मा रुसी समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । रुसी समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि पूर्वी युरोपका धेरै देशहरूमा समाजवादी क्रान्तिको लहर नै चल्यो । जर्मनी विभाजित भयो ( हाल एकिकृत )। कोरिया आज पनि विभाजित अवस्थामा नै छ ( उत्तर र दक्षिण ) । आज विश्वमा केवल चार वटा देशमा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था छ ।
ई सं २०२० मे ५ मा कार्ल मार्क्स जन्मिएको दुईसय दुई वर्ष पुग्यो । यस अवधिमा नेपालमा थुप्रै कम्युनिष्ट पार्टीहरूले मार्क्सबादी भनेर आफूलाई मार्क्सबादी खेमामा उभ्याए । त्यसमध्ये वर्तमान सत्तारूढ पार्टी अग्रस्थानमा रह्यो । विश्वका दर्जनभन्दा बढी देशमा कम्युनिस्ट पार्टी सत्ताको लुछाचुँडीमा मस्त छन् । नेपाल लुछाचुँडीमा अग्रस्थानमा होला ।
कार्ल मार्क्सले दिएको विश्व दृष्टिकोणबाट नै संसारभर ठूलाठूला परिवर्तनकारी संघर्षहरू भयो, कतै सर्वहारा वर्गको जीत भयो, कतै हार्यो । तिनै कार्ल मार्क्सको विचारले संसारभर क्रान्तिको लहर नै ल्यायो । र नेपाल पनि अछुतो रहेन ।
नेपालमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीको नाम गरेर सरकार आएको दुई बर्ष नाघ्यो, यो ५ बर्षे आवधिक सरकार हो तर यसमा कम्युनिष्टमा हुनुपर्ने कुनै गुण देखिएन । सरकार गठन भएदेखि हालसम्म मार्क्सबादी निति अन्तर्गत के के काम भए त ? सिवाय सत्ताको लुछाचुँडी बाहेक ?
बिसौं शताब्दीमा समाजवादी खेमाले पुँजीवादी खेमालाई त्राहीमाम बनाएको थियो । तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै हुर्किएका गैरकम्युनिस्ट चरित्रले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटनको दिशातिर लगे र पुँजीवादीहरूसँग आत्मसमर्पण गराए । अन्ततः समाजवादी खेमा शक्तिहीन र गतिहीन बन्न पुग्यो । कारण थियो जसरी मार्क्स र एंगेल्सले लेखेर भनेका थिए, त्यसरी मार्क्सवादी कार्यदिशा चरित्र अघि बढ्न सकेन ।
अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै चरित्र नेपाली सत्तारूढ पार्टीमा देखा परेको छ । यसले कम्युनिष्ट सरकारले गर्नुपर्ने कुनैपनि काम गरेन र गर्ने संकेत सम्म पनि दिएको छैन । बरू पुँजीवादी चरित्र अन्तर्गत रहेर अपहरण, पार्टी फुटाउन सहज हुने कानून ( अध्यादेश ) ल्याउन उद्दत रहेको प्रष्ट देखिन्छ । भलै यो कार्यबाट तत्काल पछाडि हटेको छ र कम्युनिष्ट पार्टीमा ब्यक्ती हावी छ कि पार्टी त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
ई सं २००७ तिर देखिएको विश्वब्यापी मन्दीले कार्ल मार्क्सको त्यो भनाइलाई झनै सर्वस्वीकार्य पारेको छ । त्यसपछि विश्वमा बढ्दै गएको धनी र गरिबबीचको खाडल, अनि अब कोरोनाले निम्त्याएको महामारीका कारण विश्वमा सिर्जना हुने आर्थिक विश्रृङ्खलताा ले उनको भनाइलाई एक पटक फेरि सोच्न बाध्य पार्नेछ । यसै समयमा शेयर बजार उच्च दरमा ओरालो लाग्यो र आर्थिक झड्का व्यहोर्नुपर्‍यो । त्यसबेला संसारभरको अर्थ व्यवस्थामा अभूतपूर्व सङ्कट आयो । त्यो सङ्कटको धेरै उद्योगमा भन्दा वित्तीय क्षेत्रमा अधिक असर पर्‍यो भावी दिनमा यस्ता सङ्कट पुनः आइपर्ने निश्चित छ ।
पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाका पिता एडम स्मिथको ‘वेल्थ अफ नेसन’ को ठीक उल्टो कार्ल मार्क्सले बजारलाई चलाउनमा कुनै अदृश्य शक्तिको भूमिका नहुने स्पष्ट पारेका थिए । उनले त्यतिबेलै आर्थिक मन्दी बारम्बार आउने र यसको कारण पुँजीवादमा निहीत रहेको बताएका थिए । मार्क्सले पुँजीवाद पूर्ण रूपमा समाप्त नभएसम्म यस्तो अवस्था कायमै रहने उल्लेख गरेका थिए । यसबाट नेपाली कम्युनिष्टहरुले बेलैमा सोचेर आफु भित्रै रहेको गैर कम्युनिष्ट चरित्रलाई कारवाही गरेर शुद्धिकरण गर्नु जरूरी भैसकेको छ ।